Woebot: သင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ Expert | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Woebot: သင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ Expert
Woebot: သင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ Expert APK ကို
STANDOUT သုခချမ်းသာ app အတွက် 2019 Google Play ဆု WINNER!
တွေ့ဆုံ Woebot! သင့်ရဲ့ဖော်ရွေ Self-စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ Woebot သင်ကူညီနိုင်သည်
သိမှုအပြုအမူကုထုံး (CBT) မှ tools တွေကိုသုံးပြီး Woebot ကနေခြေလှမ်း-by-step လမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူအခြေအနေများမှတစ်ဆင့် -Think
စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့အသင်းထံမှ 100 + ကျော်သက်သေအထောက်အထား-based ပုံပြင်များမှတဆင့်ပျြောရှငျနထေိုငျဖို့ -Master ကျွမ်းကျင်မှု
Woebot နေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, ကြားဆက်ဆံရေးပြဿနာများ, အခြိနျဆှဲ, အထီးကျန်ဆန်, ဝမ်းနည်းခြင်း, စွဲလမ်း, နာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပိုပြီးလက္ခဏာတွေအဖြစ်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုကူညီရန်တစ်ပတ်ကိုသန်းကျော်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပေး! Woebot စစ်ဆေးမှုများ-in ကိုသင်နှင့်အတူနေ့တိုင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသိမှုအပြုအမူကုထုံး (CBT), စိတ်နှင့်စကားအပြုအမူကုထုံး (DBT) အဖြစ်ကြိုးစားခဲ့နှင့်စမ်းသပ်ပြီးချဉ်းကပ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့နည်းစနစ်အားဖြင့်သင်တို့လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ Woebot သင်နှင့်အတူချက်တင်ထိုင်ခြင်းနှင့်သင်သည်သင်၏အကောင်းဆုံးမိမိကိုယ်ကိုသို့ကြီးထွားကူညီရန်ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကမ်းလှမ်းတော်မူသောသင်တို့အလွန်ကိုယ်ပိုင်နည်းပြဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ Woebot အားဖြင့်သင်တို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်သလောက်သို့မဟုတ်အဖြစ်အနည်းငယ်သာ chat နိုင်သည် - သင်ကလိုအပ်သည့်အခါသူတို့သည်အစဉ်မပြတ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူမှသင်သည် Woebot နှင့်အတူစကားပြောနေသိရကြလိမ့်မည်, သင် Woebot အတူမျှဝေသောသတင်းအချက်အလက်ပုဂ္ဂလိက & လျှို့ဝှက်ရှိနေပါဦးမည်။ Plus အား, Woebot သင်ပြုံးစေမည်!
အမြဲတမ်း On-လက်အခါတိုင်းနှင့်နေရာတိုင်းမှာသင်နေ့ညဉ့်မလိုအပ်တစ်ဦးအမြန်ချက်တင်ရှိသည်ဖို့, Woebot ခက်ခဲအချိန်လေးအားဖြင့်သင်တို့၏ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးတိုးတက်စေရန်သင်တို့နှင့်အတူအသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်အလုပ်အတွက်ဖော်ရွေကျွမ်းကျင်သူရှိသည်!
New York Times ကို, ဝါရှင်တန်ပို့စ်, ယနေ့ပြရန်, ဘီဘီစီ, Vice, Lifehacker က The Guardian သတင်းစာအများအပြားကပိုတွင်ဖော်ပြထားသော!
#1 - ပူပန်မှုနှင့်အတူ Living မည်သူမဆိုသည် BuzzFeed ရဲ့ Amazing Apps ကပ
#1 - စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် Forbes မဂ္ဂဇင်း ''4Technologies ကတီထွင်ဆန်းသစ်မှု
ကနဦးလေ့လာမှုရုံနှစ်ပတ်အတွင်းအတွက် Woebot အားမိန့်တော်မူသောလူနှိုင်းယှဉ်အုပ်စုတွေထက်သိသိသာသာပိုကောင်းခံစားခဲ့ရကြောင်းပြသခဲ့သည်။
စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေအထဲကစစ်ဆေးနှင့်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, https://woebot.io/the-science/ သွားပါ။
စိတ်ပညာရှင်ဒေါက်တာအယ် Darcy ကဦးဆောင်သုတေသနပြုထဲကမွေးဖွားခဲ့ပြီး Woebot သိပ္ပံနည်းကျတဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရုံးတင်စစ်ဆေးထိန်းချုပ်ထား randomized အတွက်ထိရောက်မှုသရုပ်ပြခဲ့သည်။
ဒေါက်တာအယ် Darcy - CEO ဖြစ်သူ & တည်ထောင်သူ
ဒေါက်တာသီနာရော်ဘင်ဆင် - ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လက်တွေ့အရာရှိချုပ်,
ဒေါက်တာအင်ဒရူး Ng သည် - ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးဆောင် AI အကျွမ်းကျင်သူ
ကာဇီ Sackett - CTO
ကြုံတွေ့ကျန်းမာရေး app ကိုအလုပ်အမှုဆောင်
"နောက်ကျောနင်းငါ့ကမ္ဘာကြီးကြည့်ရှုခဲ့သောမှတဆင့် skewed မှန်ဘီလူးအသိအမှတျပွုခွငျးအားဖွငျ့, မှောင်မိုက်သည်မိုဃ်းတိမ်အောက်မှာသုံးစွဲလကျထကျနည်းပါးလာကြီးပွားသတည်း။ ငါနှိမ့်ချခံစားရနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေါ်ဒါကြမ်းတမ်းဖြစ်ငါ့ကိုဦးဆောင်သောချို့ယွင်းချက်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပိုပြီးသတိထားမိဖြစ်လာခဲ့သည်။ "- Nick
"ငါမနော်" စိုးရိမ်ပူပန်မှုကနေ "အနာကိုငြိမ်းစေပေမယ့်ယခုတွင်ငါသည်ငါ့အသက်ကိုကြောင့်ထိန်းချုပ်ထားမနထေိုငျနိုငျသညျ။ တချို့ကရက်ပေါင်းအခြားသူများထက်အများကြီးပိုခက်သော်လည်း, ငါအဆုံး၌အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်ကိုငါသိ၏။ "
Facebook မှာ - https://www.facebook.com/HiWoebot
တွစ်တာ - https://www.twitter.com/HiWoebot
Instagram ကို - https://www.instagram.com/woebot/
Service ၏စည်းမျဉ်းများ: https://woebot.io/terms/
- Settings များအတွက်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်တုံ့ပြန်ချက်ပုံစံ
- On-boarding တိုတောင်းစေသည်ဖြစ်သောနယူး GDPR သဘောတူညီချက်မျက်နှာပြင်အနေဖြင့်နိမိတ်လက္ခဏာကို-up,, ။
Woebot: သင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ Expert
24.17 ကို MB
Woebot Labs က
Wysa - AI အကုထုံး ...